पक्षी किन सपना देख्छ?
सपनामा एक पक्षी खुसी, एक सन्देश, एक व्यक्ति संग बैठक जसको बारे मा निद्रा प्राय: भर्खरै सम्झन्छ। साथै, एक पक्षीको बारेमा एक सपनाले सफलता , लाभ, कहिलेकाहीं गप्पेसको बारेमा सपना देखाउँछ। यदि एक जना स्त्रीको एक पक्षी सपना हो, त्यसो भए त्यस्तो सपनाले आफ्नो विवाह वा नयाँ प्रेमलाई बगाउँछ। सामान्यतया, सपनामा पक्षी रचनात्मकता र फंतासी उडानको प्रतीक हो। कहिलेकाँही यस्तो सपना सपना सपनालाई चेताउनी गर्छ कि त्यो धेरै वास्तविकताबाट हटाइएको छ र पूर्णतया आफ्नो कल्पनामा अवशोषित हुन्छ। सपनामा हेर्नको लागि उडान पक्षीले निकट भविष्यमा सपनाको पूर्णता भनेको, त्यस्ता पक्षी भविष्यवाणी समृद्धि र सौभाग्य।
हामी किन सानो चराहरु को बारे मा सपना देख्छौं?
साना चराहरू सानो लाभको सपना देखाउँदैछन्। सपनामा एक सानो चरा देख्न को अर्थ, स्प्रिंगको जीवनमा शान्ति र शान्ति आउनेछ। यदि महिला एक सानो चराको सपना देख्छ भने, चाँडै त्यो गर्भवती हुने हुन्छ र प्रायः एक केटी जन्मेको छ।
उसको हातमा चरा किन सपना देख्छ?
पक्षीलाई आफ्नो हातमा राख्नुहोस्, वास्तविक जीवनमा केहि व्यवसायमा सफल हुन। व्यवसायीलाई यस्तो सपनाले क्यारियर लिक अफको बारेमा कुरा गर्दछ, व्यवसायमा प्रगति। यदि सपनामा बिरुद्ध आफैं आफ्नो हातमा बस्नुभयो भने सपनाको सपना सपना सुसमाचारमा वा नयाँ प्रेमको साथ भेटिन्छ जुन लामो समयसम्म हुनेछ। यदि सुँगुरले फ्लाईमा पक्षीलाई समात्न भने, त्यसपछि यो पत्र वा अप्रत्याशित उपहार वा पुरस्कारको लागि पर्खिरहेको छ।
घरको चरा किन सपना देख्छ?
एउटा भेडा जो घरमा उडेको छ, गर्भवती महिला गर्भावस्थाको प्रतिज्ञा गर्दछ। त्यसै गरी, यस्तो सपना भनेको मानिसबाट सन्देश प्राप्त गर्ने हो जसको सपना देखेर लामो समयसम्म देखिएन। यदि एक कुखुरा (बतख वा चिकन) घरमा सपना देखाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यसमा बाँच्न सम्भव छ।
पिंजरामा एक पक्षी के हो सपना सपना?
सपनामा पिंजरेमा एक पक्षी देख्न, एक जवान महिलाले सफल विवाहको लागि तयारी गर्नु पर्छ। यदि पिंजरामा धेरै पक्षीहरू छन् र तिनीहरू खुसीसाथ छिर्छन्, सायद चाँडै पारिवारिक रूपमा पुनःस्थापित हुनेछ। एक पिंजरे मा ग्लेडली गायन birdies हंसमुख मेहमानों को बारे मा सपनाहरु। चहचहाना पक्षीहरूको भरी एक सुन्दर पिंजरा स्वतन्त्रताको वास्तविकतामा भविष्यवाणी गर्दछ र आफैले विश्वास लिइरहेछ।
ट्रिनिटी - लक्षण र सीमा शुल्क
किन स्याउ-पेटी स्याउ संग?
हामी किन अखरोटको बारेमा सपना देख्छौ?
स्नान किन किन सपना छ?
सपना व्याख्या - समुद्र र समुद्र को बारे मा सपना कसरि व्याख्या गर्न को लागि?
हड्डीहरूको खुट्टा के हो?
दस्तुर खोल्नुहोस् एक चिन्ह हो
बायाँ खुट्टा महसुस गर्छ?
किन सुन्नु हुन्छ?
जीवन पथहरूको संख्या
फेंग शुई हलवे
गैरी ओल्डम्यानले पाँचौं पटक विवाह गरे
डोम कैथेड्रल (तालिन)
घर थिएटर कसरी जडान गर्ने?
25 तारा जो स्थितिको बारे मा परवाह गर्दैन र सार्वजनिक यातायात द्वारा ड्राइव!
भान्सा निकाट - कसरी उत्तम विकल्प, सल्लाह र सुझावहरू छनौट गर्ने
वसा जलने अभ्यास गर्दछ
Tilda हिमपात पहिल्यै - पैटर्न
7 वर्षको लागि केटालाई के गर्ने?
बच्चाहरु संग ग्वेनथ पल्ट्रो दक्षिण अमेरिका सम्म यात्रा गर्छन
गर्भावस्थामा गर्भाशय उपचार
प्रेम गर्नेहरूलाई कल गर्न साजिश
शरद ऋतुमा पनीर रोपण